Ngokuqinisekile awekho abesifazane, ngubani manje noma ngokuhamba kwesikhathi ongafuni ukuba abe umama ojabulayo ingane enhle. Ngeshwa, akuyona yonke wobulili bubuhle abakhulelwayo, kokuba isifiso eyodwa kuphela. Phela, endaweni embi, izifo langaphambilini, ukukhathazeka njalo futhi igcizelela nomthelela namandla empilweni yomuntu, kuhlanganise umsebenzi walo zokuzala.
Uma imizamo isisu ingane Ungasingenisi umphumela efanele isikhathi eside, odokotela bethi mayelana nenzalo. Nokho, bexabana ukuthi into enjalo - hhayi umusho. Namuhla, cishe bonke ubunzima ku lokukhulelwa wengane solvable. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukuba yithemba, futhi uMkhandlu futhi enza konke okusemandleni ukubhekana nazo zonke izici evimbela abesifazane ekutheni ngeminyaka abaye bakhulelwa.
Ziyini izimbangela ukungabi nenzalo?
Phendula lo mbuzo kunzima ngempela. Lokhu kungenxa yokuthi izimbangela ukungazali kukhona omningi. Zingase ezihambisana iziyaluyalu hormone e bobabili abalingani, izifo ezithathelwanayo, ezifweni ezithathelwana ngobulili, isakhiwo okungavamile izitho zangasese yangaphakathi nokunye.
Kaningi, lapho imizamo eside futhi akuphumelelanga okukhulelwa ingane, imibhangqwana eminingi cabanga IVF. Nokho, le nqubo eqolo. Ngaphezu kwalokho, akusikho kahle ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, abanye ochwepheshe batusa ukusetshenziswa noma imithi yolunye uhlobo.
Yimaphi amathuluzi nomthelela sokukhulelwa?
Namuhla kukhona izidakamizwa eziningi ukudala izimo ezikahle ukuze akwazi ukukhulelwa. Nokho, bendabuko wabasekeli imithi ukuphikisana ngokuthi kukhona into engcono ngaphezu kokukhonza ngezindleko zemithi engamakhambi. Omunye efaneleka kakhulu ngempumelelo izindlela iyona "ukumnika umhlengikazi ophethe." Muhle kakhulu ukugcina kakade ngesikhathi sokukhulelwa, kanye ukwelapha ukungatholi abantwana.
Kuyinto imfihlo ukuthi endulo yezifo ezihlukahlukene, abantu baye basebenzisa amakhambi emvelo kuphela ngesimo amakhambi, izithelo, amajikijolo, nokunye. D. izingxenye aqukethe wonke umsoco ezidingekayo ukuthi kalula amuncwa wumzimba futhi akuphazamisi kuye echithayo.
"I ukumnika of umhlengikazi ophethe" yadalwa ngisho quacks, ngubani kahle abelethwe amakhambi ezingaba omuhle kuthinte uhlelo okuzala ka abesifazane. Le mali ungakuvumeli ukuba sokukhulelwa kuphela, kodwa futhi kuqinisa futhi kuthuthukisa impilo omama esizayo, kusiza bathela izithelo, kanye nethonya elihle inqubo lokuzalwa.
Ukwakheka izimali kazwelonke
Yini likhona "ukumnika ka umhlengikazi ophethe"? Ukwakheka lokhu medium ifaniswe kahle. Amakhambi equkethe izidakamizwa ingatholakala kalula ehlathini lendawo, izimfunda, ukusula nokunye.
Ukuze wenze real "ukumnika Matrona", zonke izakhi ezidingekayo siyadingeka ukuze uxhumane olinganise esiqinile.
Ngakho, ngo-ukubika amathuluzi zihlanganisa:
Hibiscus noma itiye hibiscus kuyinto isisu esihle. It hhayi kuphela ubonisa zonke ubuthi emzimbeni, kodwa futhi aqede izinhlungu zibe abese ephumula imisipha.
Lily esigodini, noma-evening primrose unesibopho ukukhiqizwa kakhulu hormone ocansini nowesifazane. Phakathi nenkathi yokukhulelwa, lesi sici kusiza ukuphungula ingozi kwesisu kanye lula ubuthi.
Imbali Field chamomile ukuqeda ukuvuvukala ukucindezeleka.
Wintergreen libuye lisetshenziswe izinqubo ukuvuvukala. Le into kuholela ukusebenza amaqanda evamile, akunqandi yisisu futhi aqede toxicosis.
Borovaja kwesibeletho - ukuqoqwa core wengxenye kubhekwe. It livame ukusetshenziswa ukuba aphathe ukungazali kanye nezinye izifo esifazane ingxenye. Kufanele kuqashelwe ukuthi le isitshalo libonisa izakhiwo isisu futhi eqeda ukuvuvukala.
Wintergreen kuqinisa umzimba wentombi futhi kuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela.
Oregano esetshenziswa njengoba isidambisa-zinhlungu. Iphinde aqede ukucindezeleka.
Njengoba ubona, "ukumnika umhlengikazi ophethe" siqukethe kuphela izithako zemvelo. isithako Its main esebenzayo kwesibeletho upland. Lesi simila wenza kahle izifo zesifazane. Ngaphezu kwalokho, limelela kwalokho eziyizici utshani ezifana-evening primrose. By endleleni, le ngxenye lisetshenzisiwe nangokuqondene izifo zabesifazane.
Ingxube izinto futhi kunomthelela ukuzinza we ekukhiqizweni kwama-hormone ocansini owesifazane, kanye nethonya elihle HC alawule nomjikelezo wokuya esikhathini.
"I ukumnika of umhlengikazi ophethe" kusukela ukungazali kuhilela eziyinkimbinkimbi amavithamini, amino acid kanye amafutha, ezidingekile operation kahle kwezitho izinhlelo omama esizayo. Ukwakheka okunjalo ekwakhiweni ithuthukisa ukungatheleleki ngcono isimo uhlelo zokuzala.
Kufanele kuqashelwe ukuthi icala akubhekwa isitshalo kuhlanganisa izingxenye zokwenziwa futhi onobungozi. Iqukethe amakhambi omisiwe kuphela.
"I ukumnika of umhlengikazi ophethe", ukubuyekezwa zazo kukhonjisiwe ngezansi, has nhlobo Izimo. Akuvunyelwe ukuthatha kuphela uma imithi hypersensitive.
Kufanele futhi ukuthi le izidakamizwa alunamkhawulo ubudala. Ukusetshenziswa Its idinga kuphela acabangele udokotela umthamo Kunconywa futhi lwemithi zokwelapha.
Ingabe uyazi ukuthi ingxenye ngayinye isebenza ku izindlela utshani? "I ukumnika of umhlengikazi ophethe", ngokusho kongoti, zihlanganisa hormone isitshalo, efana amahomoni zemvelo zesifazane. Basuke bahileleke ukwelapha izifo gynecological futhi ulungiselele emzimbeni womuntu wesifazane ngoba ukukhulelwa esizayo.
Ngokusebenzisa utshani ezifana chamomile futhi oregano, inkokhiso Okubukwe ikhuthaza ukuqedwa nerve futhi kwemisipha ukungezwani, kanye ukuzinza zombuso womuntu kwengqondo.
Ngenxa yokuba khona e yezingxenye nokulungiselela ukuthi abonise izakhiwo isisu umama olindele umntwana is excreted zonke ubuthi kanye nemfucumfucu etholakala kahle.
Umthelela zokwelapha zomuthi wabonakaliswa hhayi kuphela ekuqedweni izifo gynecological, kodwa futhi ekudaleni isimo akhulelwe ukuvimbela isisu nokuguqulwa.
"I ukumnika of umhlengikazi ophethe" ekhaya esetshenziswa abesifazane abaneminyaka engu 30-50 unesifo esibi of "ukungazali". Ochwepheshe ukubika ukuthi ukuthathwa lokhu remedy isitshalo ikhuthaza imiphumela elandelayo:
66% abesifazane ukwamukela umjikelezo ekhulelwe 3;
30% abesifazane eside elindelwe ukukhulelwa kwenzeka ngesikhathi 4 izinyanga emva beqeda imfundo ethatha ezelaphayo;
U-22% abesifazane abaye balahlekelwa zonke izifo gynecological (hhayi esindayo).
"I ukumnika of umhlengikazi ophethe" kule ekhemisi ungathenga at an ngentengo eqolo. Njengoba ukuba uquketheni leli thuluzi zihlanganisa lokhu okulandelayo:
Lokho kwenza sokukhulelwa futhi ibuyisela impilo abalahlekile zabesifazane;
ukuphepha ukusetshenziswa kanye ukungabikho Izimo;
Ukwakheka yemvelo ngaphandle amakhemikhali imithi enobungozi.
Kanjani ukwenza "ukumnika ka umhlengikazi ophethe"?
Okubukwe iqoqo yemifino angathengwa at Pharmacy njalo. Kulokhu, wena angadingi somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela. Lokhu kungenxa yokuthi lokhu izidakamizwa iphephile ngokuphelele impilo. It ayinayo imiphumela eseceleni kanye contraindications.
Ngakho indlela ukupheka "ukumnika umhlengikazi ophethe"? Indlela lokhu imithi kudinga ukunamathela ngokuqinile iziqondiso ezilandelayo:
Omunye iphakethe ngeqoqo yemifino kumelwe sisetshenziselwe 200 ml amanzi ashisayo abilisiwe. Kuleso simo, uma izidakamizwa yathengwa ngesimo imali, khona-ke kufanele kuqashelwe inani elilodwa isipuni.
Gulf ikhambi elithile lokwelapha ngamanzi abilayo, amboze nge izitsha isivalo, bese bagcizelele imizuzu 7-13. Ngokuhamba kwesikhathi, kwezidakamizwa ukungazali uzolunga ngokuphelele.
Thatha ukumnika kufanele ube enye ingilazi kanye ngosuku ngesikhathi sokudla. Uma niphuza kwakubonakala ebabayo ke ingasetshenziswa ngezinyathelo ezintathu.
lesifanele inqubo yesicelo
Ukuze uthole umphumela oyifunayo kufanele kubhekwe isiphuzo imithi nsukuzonke ifomu asanda kuphela.
ukuphathwa Okungavundile zindlela kungathatha Adalberto isikhathi eside. Siyini isizathu? Ochwepheshe bathi uma kuvulwa ukuthatha yemifino umhluzi izingxenye zalo eziwusizo buthelela yomzimba wowesifazane kancane kancane. Nokho, ziyisici isikhathi eside.
course yokwamukela ukumnika Ngokuvamile zokhahlamba kusuka izinyanga ezimbalwa ezinyangeni eziyisithupha. Phakathi ukwelashwa, qiniseka uthathe amakhefu futhi ukuqapha isimo sabo.
Ekuqaleni ukumnika isilinganiso kumele ithathwe izinsuku ezinga-21. okunye ukwelashwa kufanele simiswe izinsuku ezingu-7. Uma kudingeka, leyo nkambo is liphindwe izikhathi eziningana.
Kunezikhathi lapho ngisho ukwelashwa izinyanga eziyisithupha nale ejenti akukuniki elamukelekile. Kulesi simo, odokotela batusa ukwenza semi ikhefu. Lokhu kuzovumela umzimba wentombi bangabeki.
Ezimweni ezimbi kakhulu ukulungiswa angabhekwa umphelelisi izidakamizwa ezivamile (at kadokotela udokotela).
Ngakho, kungashiwo ngokuphepha kuqashelwe ukuthi "ukumnika Matrona" limele ithuluzi lokuphila esiyingqayizivele esetshenziselwa nokwelashwa iziyaluyalu izifo zabesifazane. decoction Imithi uthatha isinyathelo ngokushesha futhi ngobumnene. ukunambitheka kwalo akuyona revulsion, kanye nomphumela oqabulayo akuphazamisi omubi ipheshana wokugaya ukudla.
Izibuyekezo Umthengi kanye odokotela
Mayelana wuMthetho samanje, kukhona Izibuyekezo eminingi emihle. I ubulili bubuhle bagomela ngokuthi Yiqiniso ngemva lidlule yokwelashwa wakwazi ukukhulelwa.
Iningi labesifazane ukubika ukuthi ekhulelwa ngenkathi ethatha "infusions umhlengikazi ophethe" iphutha cishe ngokushesha. Abanye baphikisa ngokuthi omazisayo ezimbili emapheshana on the test, babona izinyanga kuphela emva 4-6.
Kufanele kuphawulwe ukuthi zikhona abamele ubulili buthaka, ukuthi izidakamizwa awazange asize. Odokotela bathi lokhu izinselelo ezikhona ezweni okubalwa ukuba zomama.
Ngokusho kochwepheshe, kusebenta izidakamizwa kokubuyekezwa ezihlobene imvelaphi yawo engokwemvelo. Izingxenye asebenzayo zomuthi Kusizuzisa on umzimba wowesifazane nesimiso salo zokuzala. Ngaphezu kwalokho, odokotela bathi umuthi kahle kubonakala noma lihambisana izidakamizwa ezivamile ngoba inkinga yokungabi nenzalo.
Utshani Purgative for ukuqunjelwa
Izikhangibavakashi Korolev, esifundeni eMoscow: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Ukungasebenzisi syndrome: kuyini? Izimpawu kanye Ukwelashwa
Indlela yokususa upende kusuka ezingutsheni - amathiphu wokubuyekeza
Inyama kubhakwe kuhlanganiswe nanoma zucchini kuhhavini. Recipe ngesithombe